BORIC ACID: MIYUU SUURTAGAL YAHAY IN LA XOQDO 3% XALKA DHEGEYSIGAAGA IYO SIDEE SAX U TAHAY, IMISA JEER MAALINTII AYAA LOOGU TALAGALAY DADKA WAAWEYN IYO CARUURTA LEH OTISTA? - WIXII MARTIDA
Boric acid waa antiseptic aad u fiican. In geedi socodka barar ah ee dhegta for instillation, waxaad isticmaali kartaa xal khamriga ah boric acid - 3 boqolkiiba. Muhiim maaha in aad is-daaweysid, laakiin hubi inaad la tashatid takhtar si aad u hesho ogaanshaha saxda ah. Cudurka dhegaha ee dhegaha waxaa la socda xanuunka ba'an ee adag in la adkeeyo. Xaaladahan oo kale, isticmaal qalabka la heli karo si dhakhso ah u neefsataan caabuqa iyo baabi'iyaan xanuunka. Xitaa xilliyada Soofiyeeti, boric acid wuxuu noqday daroogada ugu caansan ee ujeedadaas.
Miyaa loo isticmaali karaa jarista xanuunka iyo cirridka?
Boric acid waxaa loo isticmaalay sidii daaweyn loogu talagalay otis muddo ka badan boqol sano.. Waa dad caan ah, inkastoo ay soo ifbaxeen noocyo badan oo kale, si tartiib tartiib ah ugu shaqeynaya jirka. Dadka qaangaarka ah ee aan wax ka qabin dhibaatada ka timaadda xaalada kelyaha, waxay ku dhowdahay dhib la'aan. Su'aasha ah in ay suurtagal tahay in lagu aaso boric acid dhegta, jawaabta waxay noqon doontaa mid wanaagsan oo ciriiri ah. Si kastaba ha noqotee, iyadoo wax laga badalayo.
Fikradda Boric acid ee 3 boqolkiiba waxaa loo isticmaalaa oo kaliya daaweynta otista. Haddii uu cudurku ku dhaco dhegta dhexe, daawadani ma aha oo kaliya waxtar la'aan, laakiin sidoo kale khatar ah. Uma isticmaali kartid daawadan si daaweyn loogu talagalay bararka nadiifka ah, maaddaama uu galo dhiigga, isagoo saameyn taban ku leh jirka.
Waa muhiim! Boric acid waxaa lagu dhejin karaa dhegta kaliya sida dhakhtarku u qoray!
Dhegaha dadku waxay ka kooban yihiin qaybta dibedda - muuqaalka indhaha, dhexdhexaadka iyo gudaha. Midka dhexe wuxuu ku yaalaa xuubka xannuunka wuxuuna u adeegaa inuu sameeyo dhawaaqa. Gudaha - qaybta ugu dhibka badan ee nidaamka, taas oo lagu soo koobay oo kaliya marka laga hadlayo soo saaridda warbaahinta caadiga ah ama ka hortagga astaamaha cudurrada faafa.
Cudurka Boric waxaa loo isticmaali karaa oo keliya isticmaalka caabuqa dhegta dibadda.. Waa muhiim inaad isticmaasho qalabkan oo keliya sida uu dhakhtarku soo qoray, tan iyo haddii uu jiro xuubka xajmiga, xajmigu wuxuu ku dhici karaa godka maskaxda oo xitaa keena gubasho. Waxaa intaa dheer, qalabka waxaa loo isticmaali karaa dhacdooyinka boogaha, canbaarta, finanka iyo cudurrada kale ee dermatolojiga ee maqaarka dhegta dibadda. Laguma aamini karo boric acid, haddii uu jiro nidaam daahirsan!
Daahfurka, 3% boric acid waa la isticmaalaa. Inkasta oo ay hoos udhacday astaamaha, haddana waxay awood u leedahay in ay keento cadho iyo falcelin aan fiicnayn ee dadka qaba cudurrada khaaska ah.
Isticmaalka boric acid qaab ah ee dhibcood ee daaweynta otitis aan lagu talin:
Dadka qaba xanuunka kelyaha.
Haysashada xuubka dhegta.
Haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya.
Immisa dhibcood ayaad u baahan tahay dadka waaweyn iyo caruurta?
Biriitada waxaa loo isticmaalaa siideynta boric acid dhegta.. Laguma talinayo in la dhaafo qiyaasta ugu badnaan hal mar, taas oo ah:
5-6 dhibco ee dadka waaweyn;
2-3 dhibcood - carruurta.
Imisa jeer maalintii ayaa la oggol yahay iyo waa maxay muddada daaweynta?
Intee jeer ayaan ku dari karaa boric acid gudaha kanaalka dhegta? Sida caadiga ah xanuunka ayaa baaba'aya ka dib isticmaalka ugu horreeya ee daroogada. Si kastaba ha ahaatee, haddii isticmaalka dheeriga ah ee boric acid dib loo dhigo, dib-u-dhac ayaa dhici karta. Boric acid waa in la dhajiyo 3-4 jeer maalintii si loo gaaro natiijo xasilloon oo deggan.
Markii ugu dambeysay ee la soo dejiyey waqtiga hurdada. Celceliska muddada daaweynta ee carruurta waa in aysan ka badnayn todobo maalmood, dadka waaweynna way soo noqon karaan wax ka badan laba toddobaad.
Waa muhiim! Ha ku darin boric acid muddo ka badan laba toddobaad. Haddii uusan cudurku marin waqtigaan, dhakhtarka otolaryaqaanku wuxuu kuu qori doonaa antibiotics.
Tallaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan sida si habboon loo dhigo
Wixii nidaamka ayaa u baahan:
Xalka seddex boqolkiiba boric acid.
Seddex boqolkiiba xalinta hydrogen peroxide.
Suufka ama suufka.
Ka hor inta aadan si toos ah ugu soconin faleebada boric acid, dhegtu waa in la diyaariyaa iyada oo nadiifinta laga bilaabo dhegaha iyo nijiyada. Ujeedadaas awgeed, seddex boqolkiiba halbeegga hydrogen peroxide waa ku habboon, oo loogu talagalay pipet ugu horeeya.
Nadiifinta waa sida soo socota:
Madaxa u jeeday hal dhinac sidaas daraadeed dareeraha ayaa si fiican u galay galka dhegta.
Xalka hydriders peroxide waa la isku shubay, ka dibna seddex dhibcood ayaa si tartiib ah loogu dhejiyaa dhegta.
Toban daqiiqo ka dib, madaxa ayaa loo beddelay dhinaca kale, isagoo gogol dhigaya dhegta.
Si tartiib ah u tirtir dheecaanka ka soo baxay dhegtaada.
Nidaamka hargabka ee boron acid wuxuu ka kooban yahay tallaabooyinka soo socda:
Pipette xaddiga ku filan oo xal.
Madaxa jilicsan dhinaca dhinac, oo leh xanaaq.
Ku dar sadex ilaa lix dhibcood oo ah boric acid.
Ka dib 10-15 daqiiqo, madaxa ayaa loo soo jeestay dhinaca kale, ka dib markii uu dhammaystiray dhamaadka kanaalka kanaalka.
Si tartiib ah u tirtir dheecaan ka soo daaya.
Digniin! Daawooyinka labadaba waa in la kululaa kahor intaan la isticmaalin gacanta, heerkulka heerkulka heerkulka.
Si loo gaaro saameyn badan oo la taaban karo, waxaa suurtagal ah in irbadda la geliyo dhegta lagu xakameeyo xal boric habeenkii. Waxaa horay loo dhajiyay goobo badan oo raaxo ah oo ku yaala goobta dhegta, halka ay ka mamnuuc tahay inay si qoto dheer u galaan galka dhegta.
Sida loo codsado carruurta?
Boric acid waa khatar carruurta., maadaama laga yaabo in aan laga saarin jirka, taasoo keentay sumayn sun ah. Si aad u isticmaasho qalabkan daaweynta carruurta waa in si gaar ah loogu qoro qiyaasta daaweynta autolaryngogen ee qiyaasta la tilmaamay.
Sida caadiga ah, waxay ku xiran tahay saddex dhibcood saddex illaa afar jeer maalintii ilaa hal usbuuc. Carruurta ilaa illaa hal sano oo ah dhakhaatiirta autolaryngologists ma qoraan boric acid. Haddii ay tani dhacdo, waa inaad waydiiso haddii ay suurtagal tahay in lagu badalo qalabkan oo leh dulqaad aan dhib lahayn.
Uurka ma la oggol yahay?
Haddii haween uur leh ay qabto xanuunka dhegta, marka hore, waxay u baahan tahay inay booqato dhakhtarka ka dillaaci kara otisiga iyo otisiga dhegta dhexe. Boric acid waxaay leedahay hantida dhiigga ku jirta oo ka soo baxa mandheerta.. Waxay ku urursan tahay jirka dumarka iyo uurjiifka. Marka aad uur leedahay, qalabkani ma fiicna in la isticmaalo.
Intaa waxaa dheer, waxyeello kasta oo la xidhiidha dhegaha, waxay u fiicantahay in la xakameeyo isla markiiba si looga fogaado kala-guurka cudurkan dhegta dhexe, daaweynta taas oo aan macquul aheyn iyada oo aan la qaadan antibiotics gudaha. Haweenka uurka leh ma isticmaali karaan boric acid daaweyn, maadaama ay saameyn xun ku yeelan karto uurjiifka.
Dhibaatooyinka kale ee walaxda 3%
Daroogadaasi waxay leedahay saameynaha sida sida:
Lalabbo, matag, dhibaatooyin leh habka dheef-shiidka.
Sidee ay jirka u nuugto?
Boric acid waa awoodaa inuu galo dhiigga. Haddii si haboon loogu aaso dhegta iyo suurtogalnimada in la galo meel ka baxsan qaybta dibedda, waxa laga helaa saameyn lid ku ah antiseptic, oo laga takhaluso ilka xanuun iyo barar.
Ka dib markaad madaxa u soo jeesato dhinaca jihada, waa inay u soo baxdaa si xor ah. Inta ka hartay xad-dhaafka ah oo aan si fudud u nadiifin.
Digniin! Marka uu galo dhiiga, haddii uu jiro dhega dhegta dhegta, boric acid waxaa jidhka ka baxa hal toddobaad gudahood kilyaha. Iyadoo isticmaalka xad-dhaafka ah ee qalabkani, waxay ku urursan kartaa jirka, taasoo keeni karta sunta sunta.
Boric acid waxaa loo isticmaalay in lagu daweeyo otitis in ka badan boqol sano. Inta lagu jiro waqtigan, shirkadaha dawooyinka ayaa abuuray qaabab badan oo ka mid ah qalabkan, kuwaas oo ay leeyihiin wax ka horjeeda, waxaa isticmaali kara haweenka uurka leh. Sidoo kale Waxaa jira qalab gaar ah oo loogu talagalay carruurta da'dooda ka yar hal sano.. Ballankooda waxaa fuliya dhakhtar autolaryngnologist, iyada oo la tixgelinayo waxyaabaha gaarka ah ee bukaanka jirkiisa.
Boric acid waxay awood u leedahay inay la dagaallanto caabuqyada, ka hortagga horumarkooda xuubka dhegaha iyo in ka badan hal mar waxay cadeeyeen waxtarkeeda. Si kastaba ha ahaatee, maanta waxaa jira khadad badan oo aan waxyeello lahayn ee qalabkan, waxay leeyihiin saameyn isku mid ah. Waa in si taxadar leh loo adeegsadaa, gaar ahaan carruurnimada. Diyaargarowgaan loogu talagalay daaweynta cudurrada dhuunta maqalka laguma talinayo haweenka uurka leh.